Slovenia dia mety ho ny toeran-tsambo manaraka any Eropa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Slovenia » Slovenia dia mety ho ny toeran-tsambo manaraka any Eropa
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Slovenia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny vokatra fizahan-tany any Slovenia dia mifanentana amin'ny firongan'ny mpizahatany vao misondrotra, izay mahita ny fahatongavan'ireo tonga iraisam-pirenena faingana aorian'ny areti-mandringana.
Nahatratra 2019 tapitrisa ny fahatongavan'ireo tonga iraisam-pirenena tany Slovenia tamin'ny taona 4.7
Ny ampahany lehibe amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena dia avy amin'ny tsena loharano izay mifamatotra ara-jeografika amin'ny firenena
Misy fika lehibe ho an'i Slovenia hiditra amin'ny tsena loharanom-baovao mbola tsy voakitika hatreto
Na dia mbola betsaka aza ny isa tsy fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, Slovenia dia mitana ireo toetra ilaina ilaina mba hahatongavana any amin'ny toeran-kafa itodiana any Eropa amin'ny dia taorian'ny diabemika.
Raha ny angom-baovao farany, dia ireo tonga iraisam-pirenena Slovenia tamin'ny 2019 dia nahatratra 4.7 tapitrisa. Midika izany fa ny firenena kelin'i Eoropa afovoany dia tsy tao anatin'ny firenena 25 be mpitsidika indrindra any Eropa. Mirehareha amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) mahavariana 9.7% eo anelanelan'ny 2010 sy 2019 ho an'ireo tonga, dia mazava fa nanomboka nivoaka ny teny tamin'ny vokatra fizahan-tany tsy dia nankasitrahan'i Slovenia. Na izany aza, ampahany lehibe amin'ireo mpitsidika iraisampirenena dia avy amin'ny tsena loharano izay mifamatotra ara-jeografika amin'ny firenena, miaraka amin'ny 50% ny mpandeha ao amin'ny 2019 izay avy any Austria, Italia, Hongria, na Kroasia. Midika izany fa misy ny fahafaha-manao goavana ho an'i Slovenia hiditra amin'ireo tsena loharano mbola tsy voakitika any lavitra any.
Ny vokatra fizahan-tany any Slovenia dia mifanentana amin'ny firongan'ny mpizahatany vao misondrotra, izay mahita ny fahatongavan'ireo tonga iraisam-pirenena faingana aorian'ny areti-mandringana. Tamin'ny taona 2016, i Slovenia dia notendrena ho firenena maharitra indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny National Geographic's World Legacy Award, ary tamin'io taona io ihany, ny renivohitra Ljubljana dia nahazo ny anaram-boninahitra 'Capital Green Green' an'ny Komisiona eropeana. Araka ny GlobalData *, 42% n'ny mpanjifa manerantany izao dia 'matetika' na 'foana' voataonan 'ny fomba fananana vokatra ara-tontolo iainana na serivisy, manasongadina fa i Slovenia dia mety ho toerana voalohany ho an'ireo mpandeha manana andraikitra aorian'ny areti-mandringana.
Ho fanampin'izany, mihoatra ny ampahatelon'ny Slovenia no mitoetra ao amin'ny tambajotram-pifandraisan'ny EU fiarovana manokana, miaraka amina làlana fitsangantsanganana marika 10,000 km. Noho ny areti-mandringana dia maro ny mpandeha no manohy misafidy fialantsasatra ivelany any amin'ny toerana lavitra ny faritra be mponina. Ity fironana ity ihany koa dia handray an-tànana an'i Slovenia, indrindra fa maro ny mpanjifa no mihevitra ny firenena ho 'ivelan'ny lalan-kaleha' ary tsy voararan'ny fizahan-tany.
Ny fotoana laniana bebe kokoa amin'ny Internet dia mety hampitombo ny fahafantarana an'i Slovenia. Raha ny angom-baovao farany dia 37% n'ny mpanjifa manerantany no nanomboka nandany fotoana betsaka tamin'ny Internet noho ny areti-mandringana. Ny fandaniana fotoana bebe kokoa amin'ny Internet dia nahatonga ny mpanjifa maro hikaroka ny toeran'izy ireo fialantsasatra manaraka. Ny fametrahana fotoana bebe kokoa amin'ny famoronana làlana fitsangatsanganana dia mampitombo ny fahafahan'ny mpanjifa misafidy toeran-kaleha bebe kokoa noho ny fikarohana avo lenta. Izany dia mety hiteraka ny vokatra fizahantany any Slovenia haseho amin'ny mpanjifa maro manerantany.
Na dia lavitra aza ny Slovenia hifaninanana amin'ireo toa an'i Espana sy i Frantsa, izay azon'ny firenena atolotra mivantana dia mifanaraka amin'ny fitakian'ireo mpivahiny misandratra. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fotoana laniana amin'ny fikarohana any amin'ny toerana haleha, dia mety ho hitan'ny tsena loharanom-baovao lehibe manerana an'izao tontolo izao ny tanjaky ny toerana.